ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက် | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mme Panny YATHOTOU က ၂၀၁၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ၁၂း၀၀ နာရီချိန်တွင် Lao Plaza Hotel ၌ ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါဧည့်ခံပွဲသို့ မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်းနှင့် လာအို အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
နေ့လယ်စာသုံးဆောင်နေစဉ်အတွင်း လာအိုယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ ရိုးရာအကပဒေသာများဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ နေ့လယ်စာစားပွဲအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကနှင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ဝင်များသည် အမှတ်တရပန်းစည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် ညပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာစိုးရင်၊ ဦးခင်မောင်ရီ တို့နှင့်အတူ Land Mark Hotel ၌ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mme Panny YATHOTOU က ဦးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်သော Executive Committee Meeting သို့ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ လွှတ်တော်အကြီး အကဲများနှင့်အတူ တက်ရောက်သည်။